Laser kutemwa kwe dhayi sublimation akadhindwa machira uye machira - Goridhe Laser
Laser Kutemwa Kwezvikamu Zvakasarudzika
Zvishandiso zve CO2 Laser Machines yeNye Isiri Metal Sector
Laser kutemwa kwe dhayi sublimation akadhindwa machira uye machira
Mazuva ano kudhinda tekinoroji inoshandiswa zvakanyanya mumarudzi akasiyana maindasitiri akadai semitambo zvipfeko, zvipfeko zvekupfeka, zvipfeko, mireza, mireza, uye zvinyoro nyoro. Mazuva ano epamusoro yekugadzira machira ekudhinda maitiro anoda kunyange nekukurumidza kutema mhinduro Ndeipi mhinduro yakanakisa yekucheka yakadhindwa machira uye machira? Tsika yekucheka kana yekucheka kucheka ine zvakawanda zvaisingakwanisi. Laser kutemwa inova inozivikanwa zvakanyanya mhinduro yekukochekera contour yekudhindwa sublimation machira.
Chiono Laser Kutema Solution
Mhinduro yacho inoshandura nzira yekucheka dhayi emukati yakadhindwa emicheka kana machira nekukurumidza uye nenzira kwayo, zvinobva zvangoerekana zvaripirwa kana zvakasarudzika kana micheka inoitika mumachira asina kugadzikana kana akatwasuka.
Makamera anotarisa machira, kuona uye kucherechedza contour yakadhindwa, kana kunhonga akanyorwa akadhindwa mamakisi uye laser muchina unocheka zvigadzirwa zvakasarudzwa. Maitiro ese akazara otomatiki.
VISION LASER SYSTEM AKASHURE MBIRI ZVESHURE MABHUKU
Scan pamusoro nhunzi
Iyi sistimu yekuona ine kugona kukurumidza kuongorora iyo yakadhindwa machira pamubhedha wekucheka uye zvinogadzira otomatiki dhiri rakatemwa. Hapana chikonzero chekugadzira magadzirirwo akachekwa, ingotumira chero saizi dhizaini mune chero akarongeka uye gadzira zvindori zvakatemwa zvakanakisa, mireza kana zvikamu zvejasi zvine mhando dzakasungirwa mumucheto.
Scan kunyoreswa mamaki
Kamera inozivikanwa system inoshandiswa kuisa pasi kunyoresa mamaki kunyorwa pane zvako zvinhu. Iwo mamakisi anogona kuverengewa nemazvo ne laser system yedu uye chinzvimbo, huwandu uye shanduko yezvakanyorwa zvakaderedzwa nekuda kwekuongororwa kwehungwaru kwemakodhi ekunyoresa.
Kushanda kweLaser Kutema Sublimation Akadhindwa Zvinyorwa uye Micheka
Zvipfeko zvemitambo uye nguo dzakadhindwa, shangu, machira epamba
Vision Laser Kutema Sisitimu yakanakira kucheka mitambo yezvipfeko kunyanya nekuda kwekugona kwayo kucheka uye zvakapetwa zvinhu zvakasarudzika - chaizvo rudzi rwezvipfeko zvemujaho (semuenzaniso kupfeka bhasikoro
Diki logo, tsamba, nhamba uye chaiyo zvinhu zvakadhindwa zvinhu
Iyo laser cutter inoshandisa kunyoresa mamakisi, uye iyo yeGoldCAM software mukati me laser cutter ine kukanganisa nzira yekubhadhara basa, iyo inogona kungoziva pakarepo yakasvibiswa kunze kwekushongedza dhayi zvinhu.
Mabhana, mireza, hombe mifananidzo uye zvinyoro nyoro
Iyi laser yekucheka mhinduro yakagadzirirwa zvakananga kune indasitiri yekudhinda indasitiri. Iyo inopa masimba asina kuenzaniswa ekupedza rakakura fomati rakadhindwa kana dhayi-rakarongeka machira emifananidzo uye rakapfava-signage ine yakagadziriswa yekucheka hupamhi nemhurefu.
WONESA ZVAKANAKA RUDZIMA UYE DZESVONDO DZEMUSANGANO DZAKANYANYA MABHUKU UYE ZVINYORWA ZVOKUTI
Kuona Kuongorora Laser Kutema Machine
Smart Vision Yechipiri Musoro Laser Kutema Machine
Yakakura Fomati Laser Kutema Mashini eSoft Signage